Ịkwanyere Wood Plastic Door Board Production Line - China Qingdao JBD Machinery
Ịkwanyere Wood Plastic Door Board Production Line
The unit jiri akpan iji conical ejima-ịghasa extruder, DC-ọsọ ikpuru na dị okpomọkụ akara ngwá. Ọ nwere uru ndị dịgasị iche iche nke ọsọ iwu, kpọmkwem okpomọkụ akara, adaba na pụrụ ịdabere na ime. The inyeaka ígwè a kpụrụ site agụụ udi na-akpụ unit, na-eru igwe, ịcha igwe na ihe-ebu eku. The onwem nnukwu amanye jụrụ usoro grantees ndị mwube mmetụta nke profaịlụ ihe. Crawler-ụdị ịbịaru igwe jiri mere n'ezi gia moto na inventer nke e ji ezi Ọdịdị, ike na ike ịbịaru ability.etc. The ọnwụ igwe a na-agba site na pụrụ ịdabere na-ezi ihe na-arụ ọrụ na mmetụta. Ibughari cart na pụrụ iche na-echebe roba oyi akwa na-mmasị ka ihe-ebu etiti, nke na-eme ka kpọkwara dịghị-yi na mfe ọrụ. The auxilary unit na-achịkwa kọmputa na-achịkwa programmable usoro ma ọ bụ ndị ọzọ ụlọ ma ama na-achịkwa programmable usoro ma ọ bụ ndị ọzọ ụlọ ma ama controllers, nke na-eduga ná ọchịchị reliablility ma kwụsie ike.
Nke a mmepụta akara nwere ukwuu pụrụ ịdabere na elu mmepụta ogologo ndụ isi eletriki akụkụ na-dị na ngwá ngwaahịa nke a na-arụpụtara nwere obosara: 500-1000mm ọkpụrụkpụ: 20-40mm ezigbo n'elu mkpuchi mgbe mara n'ile bụ ezigbo mma ihe
Max. Obosara nke ngwaahịa (mm) 600 800 1000 1250
Extruder nlereanya SJZ80 / 156 SJZ80 / 156 SJZ92 / 188 SJZ92 / 188
Max. Extrusion ikike (kg / h) 360 360 600 600
Extruder ike (kW) 55 75 110 132
Jụrụ mmiri (m³ / h) 12 13 15 18
Abịakọrọ ikuku (m³ / min) 0,5 0,6 0,8 1
Wood-plastic ụfụfụ osisi na-bụ-eji na mgbidi osisi, siding, decking mbadamba, nkwakọ ngwaahịa na lọjistik na Nchikota pallets, ewu osisi, nchekwa racks, na-eme ka ji achọ ala, fences, ịrị handrails na na.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na China ịkwanyere osisi plastic ụzọ board mmepụta akara, price, na-eri, maka ire ere, ma ọ bụ PDF, biko chere free ịkpọtụrụ anyị, anyị bụ otu n'ime ndị na-eduga ịkwanyere Wood Plastic Door Board Production Line, Door Board Production Line, ịkwanyere Door Board Production Line emepụta na suppliers.
Previous: Pee oghere Grid mpempe akwụkwọ Production Line
Osote: XPS okpomọkụ mkpuchi Foamed efere Production Line
okpomọkụ mkpuchi Foamed efere Ime Machine
Pee Decking Machine
Pee p ABS Oké Board Ime Machine
Pee p ABS Oké Board Production Line
Pee Wood Machine
Plastic akpụ Ime Machine
ịkwanyere Wood Board Machinery
Ịkwanyere Wood Machine
Ịkwanyere Wood Machinery
ịkwanyere Wood Plastic jikọrọ ọnụ ụfụfụ Board Production Line
Ịkwanyere Wood Plastic Door Board Ime Machine
Oké Board Ime Machine
Welded tube Ime Machine
Wood Plastic mejupụtara Machine
Wood Plastic mejupụtara Machinery
Wpc Pee Board Production Line
Xps okpomọkụ mkpuchi Foamed efere Production Line
Ịkwanyere Pee Profile extrusion Line
Pee Wood Plastic Profile Production Line
Ịkwanyere Door Board Production Line
Ịkwanyere Wood Plastic Profile Production Line
Pee WPC Decking Profile extrusion Production Line
WPC Wall ogwe na eji Panel Machine